Susana မာရီယာ Urbano Mateos | | ကမ်း, NOTICIAS
ဥရောပမှာ ၁၈ နိုင်ငံရှိတယ် ယူရို။ ကံမကောင်းစွာနဲ့အတော်လေးလေ့, ငါတို့ကရှာတွေ့နိုင်ပါသည် လက်မှတ်ကအတုပါ ဒီလက်ရှိငွေကြေး၏။ များသောအားဖြင့် ၅၊ ၁၀၊ ၂၀ နှင့် ၅၀ တို့ကဲ့သို့အများဆုံးအသုံးပြုသောငွေတောင်းခံမှုများတွင်ဖြစ်လေ့ရှိသော်လည်းဒင်္ဂါးပြားများသို့မဟုတ်ကြီးမားသောငွေတောင်းခံလွှာများလည်းရှိသည်။
ကညွှန်ပြထားသကဲ့သို့ ဥရောပဗဟိုဘဏ်ငါတို့အသိုင်းအဝိုင်း၏ငွေများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောသူသည်ဥရောပတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ပျံ့နှံ့နေသည် အတု 670.000။ အဲဒီငွေတောင်းခံလွှာထဲကတစ်ခုကငါတို့လက်ကိုမရောက်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်၎င်းတို့အားငွေအပြောင်းအလဲများသို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောငွေများကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲသတိမပြုမိပါကသင်လုပ်နိုင်သည်။ ငါတို့ထိန်းချုပ်နိုင်တာကတော့နည်းလမ်းပဲ တစ် ဦး ဥပဒေကြမ်းအတုအခါစစ်ဆေးပါ.
ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုငါတို့လက်သို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းသည်မှားယွင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ပြီးပါကယုတ္တိနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအချက်မှာ၎င်းကိုစောင်ရေထဲမှဖယ်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ လက်မှတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားစူပါမားကတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားအဆောက်အအုံတစ်ခုရှိကုန်ပစ္စည်းလိုင်းတစ်ခုမှကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ပါက၎င်းကိုကောက်ယူရန်ငြင်းဆန်ရမည်ဖြစ်ပြီးမည်သည့်ဖောက်သည်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူမှလက်ခံရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
သင်သည်စူပါမားကတ်တွင်စျေးဝယ်နေသည်သို့မဟုတ်သင်၏ကားဆီကိုလောင်စာဆီနှင့်အခြားမည်သည့်စက်ရုံတွင်မဆိုငွေသွင်းပြီးသို့မဟုတ်ငွေပေးချေတော့မည်ဟုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သင်၏ငွေတန်ဖိုးမှာယူရို ၅၀ ရှိကြောင်း၊ မှားသည် ဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလိုက်သလဲ။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲ! ဘယ်လိုမှားယွင်းနေတာလဲ၊ ဒါပေမယ့်တခြားသူတွေနဲ့အတူတူဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ငါတို့အများစုဟာလိမ်လည်လှည့်စားခံနေရမယ့်အစား ငါတို့အပြစ်ရှိတယ်ခံစားရတယ် လူတိုင်းအိပ်ပျော်နေသည့်ညတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုမိမိကိုယ်ကိုအိမ်တွင်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည်တရားမ ၀ င်သောငွေစက္ကူတစ်ချောင်းရှိသည်ဟုဆင်ခြေပေးရန်ဆင်ခြေတစ်ထောင်ကိုရှာဖွေသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး က၎င်းကို ဖန်တီး၍ ဥရောပတစ်ခွင်တွင်ထောင်နှင့်ချီ။ ဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့်လိမ်လည်ခြင်းကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကိုနားလည်သည်။
အခုပိုက်ဆံအိတ်ထဲထည့်ပြီးပိုက်ဆံအိတ်ထဲထည့်လိုက်တာကိုဘယ်လိုရှောင်နိုင်မလဲ။ ချက်လက်မှတ်ကိုထုံးစံအရယူရမည်။ ထို့ကြောင့်ငွေသားစာရင်းရှိပြောင်းလဲမှုအတွက်လက်မှတ်များလက်ခံရရှိသည့်အခါသို့မဟုတ် ATM စက်တစ်ခုမှဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ငွေသားငွေပေးချေမှုကိုပြုလုပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့အားပြန်လည်သုံးသပ်ရမည်ဖြစ်ပြီးမှန်ကန်သောနည်းလမ်းသည်အမြင်အာရုံအားလုံး၏အထက်တွင်ရှိသည်။ ထိတွေ့။
ကျွန်ုပ်တို့က ECB ကိုယ်တိုင်အကြံပြုသောအဆင့်များကိုလက်တွေ့ကျကျလုပ်ရန်သွားသည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့်ငွေစက္ကူများကိုစစ်ဆေးရန်အသုံးပြုရန်၊ ထိုအလေ့အထကကျွန်ုပ်တို့အားကျွမ်းကျင်မှုနည်းစေပြီး၊ ငွေစက္ကူများသံသယဖြစ်ဖွယ်လျှင်လျှင်မြန်စွာခွဲခြားနိုင်လိမ့်မည်။ အနည်းဆုံးပြီးသားခြေလှမ်းဖြစ်သောအရာ။
သင်၏ငွေတောင်းခံလွှာများကိုစစ်ဆေးပါ၊ လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ၊ သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်မှထုတ်ယူပါ။ သူတို့ကိုလေ့လာပြီးထိပါ ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ။ သတိရပါ၊ ထိရမယ် ကြည့် သငျသညျဖို့ရှိသည် girar လက်မှတ်။
ECB မှပုံနှိပ်သောငွေစက္ကူအားလုံးတွင်ရှိသည် ထောက်ပ့ံကူညီသင်သည်သင်၏လက်ချောင်းကိုသူတို့အပေါ်သို့လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်လျှင်၎င်းကိုသတိပြုမိရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းတို့သည်သာမန်စက္ကူများကဲ့သို့ပါးလွှာသည်မဟုတ်သော်လည်းထူးခြား။ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောထိတွေ့မှုရှိသည်။ ဒီတစ်ခုကများသောအားဖြင့်ဖောင်းကြွ ငါတို့အဲဒါကိုသိနိုင်တယ် နှင့်:
အကယ်၍ သင်၏ငွေစက္ကူတွင်ဤကယ်ဆယ်ရေးအမျိုးအစားသုံးမျိုးရှိပါက၊ ဒါဟာမမှန်ပါဘူး။ သို့သော်ဤအရာသည်စိတ်ထဲထားရမည့်အရာများထဲမှတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ရှိပါသည်။
ကြမ်းတမ်းသောခံစားမှုအပြင်သင်၏ငွေစက္ကူကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ ချောမွေ့သောထိတွေ့မှုဆိုလိုသည်မှာတို့ထိရန်ခက်ခဲသည် (သို့) တင်းမာနေသည်၊ ၎င်းသည်ထိတွေ့ရန်ပျော့ပျောင်းသောစက္ကူနှင့်မတူပါ။
ရံဖန်ရံခါ ECB သည်ငွေစက္ကူအသစ်များကိုထုတ်ပေးသည် ဥရောပစီးရီး, ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်ရှိငွေစက္ကူ၏ရှေ့ဘက်တွင်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများဖြင့်ကြိုးနှစ်ချောင်းဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
သင်ငွေတောင်းခံလွှာများနှင့်ထိတွေ့ရန်အလေ့အကျင့်ရရန်လိုအပ်သည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့တို့ထိမိသောအခါ၊ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းကိုသတိမထားမိဘဲ၎င်းတို့သည်မှားသည်ဖြစ်စေသတိမပြုမိကြောင်းသတိပြုမိလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေတောင်းခံလွှာသည်မှားသည်၊ မမှန်ဆုံးဖြတ်ရန်နောက်တစ်ဆင့်မှာကြည့်ရှု။ ကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေကိုစက္ကူပေါ်တွင်မှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်းသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိကိုလေ့ကျင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ငွေတောင်းခံလွှာမှန်ကန်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မည်သို့မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်သနည်း။ ၎င်းကိုအလင်းပေါ်သို့တင်ခြင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာအလင်းအရင်းအမြစ် (ပြတင်းပေါက်၊ မီးအိမ်စသည်တို့) သို့ချဉ်းကပ်ပြီး၎င်းမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အရာများကိုစစ်ဆေးခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေတောင်းခံလွှာသည်မှားသည်ဖြစ်စေ၊ မမှန်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့အားဖော်ပြမည့်ထင်ရှားသောအသုံးအနှုန်းသုံးခုကိုကြည့်မည် ရေတံခွန် ဒါမှမဟုတ်အဖြူရောင်အစိတ်အပိုင်း လုံခြုံရေးချည် နှင့် တိုက်ဆိုင်မှုအကြောင်းပြချက်.
သင်လက်မှတ်၏ဘယ်ဘက်တွင်ကြည့်ရှုရန်လိုသည် အဖြူရောင်အပိုင်း ဒါကဟုခေါ်သည် ရေတံခွန် ကြည့်ပါ။
ငွေစက္ကူများသည်လုံခြုံရေးစနစ်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။လုံခြုံရေးချည်” ၎င်းသည်ငွေစက္ကူအလယ်တွင်၊ ဒေါင်လိုက် (ဘဏ်၏ငွေစက္ကူများတွင်) တည်ရှိသည် ပထမစီးရီး) နှင့်သင်ဥပဒေကြမ်း၏ဤအပိုင်းကိုကျော်သင့်ရဲ့လက်သည်းဖြတ်သန်းခြင်းအားဖြင့်ဥပဒေကြမ်း၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ၏ငွေစက္ကူအမှု၌တည်၏ ဥရောပစီးရီးလုံခြုံရေးချည်သည်ငွေစက္ကူ၏အလယ်တွင်လည်းတည်ရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ငွေစက္ကူ၏ဒေါင်လိုက်တစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ၁/၃ သာရှိသည်။
El ရဲစွမ်း လက်မှတ်၏
စီးရီးအသစ်များတွင်ယူရိုသင်္ကေတပေါ်လာလိမ့်မည် - €
ကိုက်ညီသောအကြောင်းပြချက်ကိုငွေစက္ကူ၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်တွေ့ရသည် ကဗျာ (နောက်ကျော) နှင့်၏လက်ျာဘက်၌ နောက်ကျော (သို့မဟုတ်ရှေ့အစိတ်အပိုင်း) ။ မီးကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၊ လက်မှတ်၏တန်ဖိုးနှင့်အတူပုံကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုက်ဆံအိတ် (သို့) သေတ္တာထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည့်ငွေစက္ကူများသည်မှားယွင်းမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်နောက်တစ်နည်းမှာကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည် ဥပဒေကြမ်း၏နောက်ကျော နှင့်မှားယွင်းမှုများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်, ကျနော်တို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချို့သောလက္ခဏာများအတည်ပြုရန်။
လက်ျာဘက်၌တစ် ဦး ရှိ၏ ငွေကြိုး ဘယ်မှာငွေစက္ကူတန်ဖိုးပေါ်လာရမည်၊ သို့မဟုတ်အမည်သို့မဟုတ်ယူရိုသင်္ကေတ (€) ။
တူညီတဲ့တီးဝိုင်းတွင်, အနီးကပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကြည့်ပါ ဥရောပပုံတူဂရိဒဏ္myာရီပိုင်ဇာတ်ကောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
လက်မှတ်က ၅ ယူရိုဖြစ်ပြီးအသစ်ကတစ်ခုဖြစ်လျှင်၊ ဥရောပစီးရီး, သင်အစိတ်အပိုင်းအတွက်မြင်နိုင်ပါသည် အောက်သော de la izquierda (အစဉ်မပြတ်၎င်း၏မျက်နှာစာကနေငွေစက္ကူကိုကြည့်, ဆိုလိုသည်မှာရှေ့) ကိုကြည့်ပါ ပုံ လက်မှတ်၏ တောက်ပ ရောင်ပြန်ဟပ် စိမ်းသို့မဟုတ်အပြာအရောင်.
တုန့်ပြန်မှုအတိအကျကိုတိတိကျကျတားဆီးရန်အတွက်အလွန်အဆင့်မြင့်သောလုံခြုံရေးအစီအမံများဖြင့် ECB မှဖြန့်ချိသောစီးရီးဖြစ်သော Europa Series အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဒါပေမယ့် Europa Series လက်မှတ်ဆိုတာဘာလဲ။ ကောင်းပြီ၊ ဒီစီးရီးမှာပါတဲ့ငွေစက္ကူတစ်ခုစီကို ၅၊ ၁၀ နဲ့ ၂၀ ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါမယ်။
၅ ယူရိုငွေတောင်းခံလွှာ: အောက်ခြေအလယ်ဗဟိုတွင်ယူရိုပါ ၀ င်သည် ဘာသာစကားသုံးမျိုးလက်တင် (ယူရို)၊ ဂရိ (EypO) နှင့်စီရယ်လ်လစ် (အီဘို) ။ လက်ျာဘက်၌, ထို ငွေလိုင်း ပျောက်ကွယ်သွားပြီး အရောင်လိုင်း သူတို့အခြားသူတွေအကြားပေါ်လာရှိရာ ဥရောပပုံတူဂရိဒဏ္ologyာရီနှင့်ငွေစက္ကူတန်ဖိုးတန်ဖိုး၊ ၅ တို့နံပါတ် ၅ နှင့်ဥရောပအလံပေါ်လာသည့်အပေါ်ဘယ်ဘက်အထက်တွင်ယခုဖြစ်သည်။ သာဥရောပအလံပေါ်လာသည် နှင့်လက်မှတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။
ယခင်ဗဟိုအလယ်ပိုင်းတွင်ရှိခဲ့သောကြီးမားသောအရွယ်အစားနံပါတ် ၅ ယခုလက်ဝဲပိုမိုပေါ်လာသည်.
လွယ်လွယ်ကူကူရှာတွေ့နိုင်သည် fecha။ ပထမစီးရီးမှာတော့ဒီနှစ်ပေါ်လာသည် 2002 နှင့်တစ်နှစ် Europa စီးရီးထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ် 2013.
10 နှင့် 20 ယူရိုလက်မှတ်: နှစ် ဦး စလုံးကိစ္စများတွင်5နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်, သူတို့သည်လည်းလက်မှတ်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည့်နေ့စွဲအားဖြင့်ခွဲခြားထားပါသည်။
ငွေစက္ကူတစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက် ပို၍ လက်ခံခြင်းနှင့်၎င်းအားမှားယွင်းကြောင်းအတည်ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်စဉ်မယုံကြည်သင့်ပါ။ သင်အိတ်ကပ်ထဲ၌ပိုက်ဆံအိတ်ထဲထည့်လိုက်လျှင်ပြproblemနာသည်သင်၏ပြbeနာဖြစ်လာလိမ့်မည်။ အကယ်၍ အခြားစက်ရုံတစ်ခုတွင်၎င်းကိုမှားယွင်းကြောင်းတွေ့ရှိပါကထိုငွေကိုမည်သူဆုံးရှုံးလိမ့်မည်နည်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး » အထွေထွေစီးပွားရေး » ကမ်း » ငွေတောင်းခံအတုဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးပါ